Abakhiqizi befenisha kanye nabaphakeli | Angeza
Ikhaya > Imikhiqizo > Umlenze wefenisha
Umlenze wefenisha uyizesekeli ezibalulekile zefenisha yokusekela ifenisha, esetshenziswa kabanzi ematafuleni, ama-sofa, njll. Ezigcawini eziningi, ama-arven ahlobisa nje umsebenzi wawo, umlenze omusha wefenisha ongawusebenzisa itafula elisha nefenisha ngokubukeka okusha.
I-AddIT PRINFINIT LEG ukukhethwa kwakho okuhle. I-assortment yethu yemilenze yefenisha ifaka izinhlobo ezimbili ezihlukile: umlenze wethebula kanye nomlenze wesofa. Sine-chain ehlukahlukene kakhulu futhi ecebile, ukukunikeza ngezinhlobo ezahlukahlukene zemilenze yefenisha kanye nomlenze wefenisha wezimpawu ezahlukahlukene ukufeza izidingo zakho. Yonke imikhiqizo yethu iye yahlola ukuhlolwa okuqinile kwe-SGS, futhi umlenze ngamunye wefenisha uphinde wahlola ikhwalithi eqinile.
I-Addith fennity umlenze inganikeza ngentengo yakho enhle kakhulu ngekhwalithi ephezulu edlula ukuhlolwa kwekhwalithi eqinile futhi ikulethela wena namakhasimende akho okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu.
I-AddIT fennit umlenze okhiqizwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zensimbi eziphakeme njengento eluhlaza ebonakalayo, ukwelashwa okuhle, okwenza kube bushelelezi futhi kuthuthukise amandla okulwa nomoya wokufafaza usawoti. Isitayela sokuqamba ukuhlukaniswa kwesitayela, futhi singasetshenziswa ezitatshelweni ezahlukahlukene zefenisha, hhayi elinqunyelwe ngesitayela esisodwa somhlobiso.
Izinhlobonhlobo zemibala nosayizi kungenziwa ngokwezifiso njengokuthandwa kwamakhasimende, imibala eminingi ongayikhetha. Isicelo se-Multi-Scene, kufanelekile ngokwengeziwe ukusetshenziswa kwethetshulwa yetafula ne-sofa. Sekela ukwenza ngokwezifiso okukhethekile, kungahambisana nekhasimende'umbala, usayizi weZinga ukukhiqiza.